anti Creasing အေးဂျင့် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး anti Creasing အေးဂျင့် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ anti Creasing အေးဂျင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - CL-901
ဒီအေးဂျင့်(CL-901)အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသန့်စင်ခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဆိုးဆေးဆိုးဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်.ဤသည်အေးဂျင့်ကြိုတင်သင့်လျော်သည်-စစ်ဆင်ရေး positioning ကို,စစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ် post ကိုဆေးဆိုး-ထိုကဲ့သို့သောသိုးမွှေး cellulose ဖိုင်ဘာအဖြစ်လွင်ပြင်ယက်သို့မဟုတ်ထိုးပြီးပိတ်ထည်အမျိုးမျိုးရောစပ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ဆင်ရေး,နိုင်လွန်,တီ/ဂ,တီ/R ကို,နှင့် Tetoron.သက်ဆိုင်မှုရှိပါ.
ဒီအေးဂျင့် 135 မြင့်မားသောအပူချိန်မှာဆိုးနိုင်ပါတယ်̊ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူကို C,နောက်တဖန်အလျှင်းမတတ်နိုင်.
ဤသည်အေးဂျင့်နေဆဲ Hard ရေ၏ရှေ့တော်၌တည်ငြိမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များသို့မဟုတ်ဆားပမာဏများစွာပါဝင်သည်(100 ဂရမ်/ဌ,သို့မဟုတ် 80g/ဌ Glauber’ဆားငန်).
ဤသည်အေးဂျင့်ကို T ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်/ကို C နှင့် S/ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်ရေတွန့်ခြင်းနှင့်ရေမှတ်များဆုံးသောအထည်များ.
အထည်တစ်ခုစီ၏အလေးချိန်သည် ၀ ဖြစ်သည်.5~2%300g အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော,နှင့် 300g ကျော်အလေးချိန် 1 ဖြစ်ပါတယ်.5~3%
ဤသည်အေးဂျင့်သည်အထူး anionic ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးဆားအော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးများသို့မဟုတ် cationic add များနှင့်မသင့်တော်ပါ.
ဒီအေးဂျင့် 100 ၏ cationic ဆေးဆိုးများအတွက်မသင့်တော်ပါ%acrylic အထည်,သို့သော်၎င်းကို acrylic ရောနှောထားသောအထည်ဆေးဆိုးရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်.မိုးရွာသွန်းမှုကြိုတင်ကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းကိုထည့်ရန်လိုအပ်ပြီးလျှောက်လွှာပမာဏသည် ၂ ဂရမ်ထက်မကျော်လွန်သင့်ပါ/ဌ,မဟုတ်ရင်ကဆိုးဆေးကိုဆေးဆိုးခြင်းကိုနှေးကွေးစေလိမ့်မယ်. .
cationic ဆေးဆိုးခြင်းနှင့် cationic အရန်မှလွဲ။ သက်ဆိုင်မဟုတ်ပါ,အခြားဆိုးဆေးများနှင့်အရန်(ဆိုးဆေးလမ်းညွှန်အေးဂျင့်များအပါအဝင်)ကောင်းသောလိုက်ဖက်တဲ့ရှိသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/anti-creasing-agent.html
အကောင်းဆုံး anti Creasing အေးဂျင့် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် anti Creasing အေးဂျင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan